HANDRAY FEPETRA HENJANA IREO GADRA POLITIKA EFA NIVOAKA - rov@higa
HANDRAY FEPETRA HENJANA IREO GADRA POLITIKA EFA NIVOAKA
10 Novembre 2011, 11:42am
Handray fepetra henjana ireo gadra politika raha tsy ampiharina ny tondro zotra (+vidéos)
Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ireo gadra politika efa nivoaka ny fonja androany. Fitakiana miendrika fanerena ny fampiharana ny tondro zotra no votoatin’izany valan-dresaka izany. Nambaran’ireto mahery fo ireto fa ny sonia efa natao momba ny tondro zotra dia manery ny mpandray anjara rehetra hanatanteraka ara-bakiteny ny voarakitra ao anatin’izany sori-dalana ivoahana amin’ny krizy izany. Takian’ireto gadra politika ireto ny fanatanterahana haingana ny famoahana ny gadra politika, ny fampodiana ireo sesitany ary ny fanokafana ireo hainoamanjery rehetra nakaton’ny mpanongam-panjakana.
Ireo rehetra ireo no ambaran’izy ireo fa fototra tokony hiaingana mialohan’ny fametrahana ny andrim-panjakana rehetra mba handeha ila izany asa fampihavanana ny Malagasy izany. Tsy mety intsony ny fisian’ny olana eo amin’ny samy mpiray tanindrazana raha ny hevitr’ireto gadra politika ireto. Raha tsy tanterahina haingana anefa ireo fepetra azahoana fitoniana ireo dia hiteraka krizy vaovao indray ny tondro zotra neritreretina hivoahana amin’ny krizy. Ny fitsipahana ny tondro zotra ihany koa dia manala amin’ny toerany avy hatrany an’i TGV sy ny praiministra notendreny.
Tsy nisy nihangana ny sarangan’olona rehetra tamin’ny famoretana nataon’ny FATE. Ireo rehetra sahy nijoro nanohitra ny tsy mety nataon’ny FATE dia nandalo fonja avy hatrany. Rehafa tafavory toy ny androany ireo nandalo tany am-ponja rehetra dia tsapa tokoa ny tsy fanajana ny zon’olombelona sy ny fanaovana zinona ny mpiray tanindrazana. Tazana tao ny mpitandrina, ny mpitandro filaminana, ny renim-pianakaviana, ny olom-boafidy, ny tanora, ny zokinjokiny ary mbola misy maherin’ny dimapolo no mbola any anaty lavaka noho ny fahasahiana mitsinjo ny mpiray tanindrazana. Izany hoe izay rehetra sendra ny haraton’ny mpanongam-panjakana sy ny hery famoretany dia nidoboka avokoa.